“လိုင်လာခန်း ရဲ့ အကယ်ဒမီ ရင်ခုန်သံ နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု ဂယက် “ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Congratulations Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi
Inspired to inspire: 8 takeaways »
“လိုင်လာခန်း ရဲ့ အကယ်ဒမီ ရင်ခုန်သံ နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု ဂယက် “
“လိုင်လာခန်း ရဲ့ အကယ်ဒမီ ရင်ခုန်သံ နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု ဂယက် ”
MRTV4 ရဲ့ Let’s Talk အစီအစဉ်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
ဇင်အောင် – နောက်တစ်ခုထပ်ပြီး မေးချင်တာက ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမရဲ့သရုပ်ဆောင်မှု အပေါ် ပရိသတ်တော်တော် များများက အရမ်းကို နှစ်ခြိုက်အားပေးကြတယ်ခင်ဗျ ဒါကတော့ ခြွင်းချက် မရှိပေါ့နော်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အမရဲ့ရင်ခုန်သံလည်း ကြားချင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ တော်တော်များက အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အရမ်း sensitive ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျ။ အမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အကယ်ဒမီရင်ခုန်သံတွေ အရမ်းကြားနေရပါတယ်။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်မှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အများများကြီးလည်း ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အမသဘောပေါက်လားတော့မသိဘူးခင်ဗျ။
လိုက်လာခန်း – သဘောပေါက်ပါတယ်မောင်လေး။ အမ အရမ်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လည်း interview တိုင်းမှာ အမကို interview လာ view တဲ့လူတွေအားလုံးက သမီး အကယ်ဒမီရမှာနော်။ အဲ့ဒီအပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲလို့ ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် – အဲ့လိုပြောလိုက်တာလေး အဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်ရင် ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ အမ interview တိုင်းမှာ ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ။ မမှန်းပါဘူးလို့။ မမှန်းတာ ကိုယ့်ရဲ့ talent ကိုမယုံကြည်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ပရိတ်သတ်တွေကို မယုံကြည်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ မမှန်းရဲဘူးဆိုတာ အကယ်ဒမီက နတ်ကြီးတယ်လေ။ ပြီးတော့ ၂ နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အကယ်ဒမီ ပေးတဲ့အချိန်ပိုင်းလောက်မှာ အမ ရန်ကုန်မှာ ရောက်ရောက်နေတယ်။ ဆိုတော့ လူတွေပြောလိုက်ပြီဆိုရင် အဲ့လူကမရဘူး။ မရတာများတာကို တွေ့နေရတယ်။ ဟာ ဒီနှစ်သူရမယ်၊ သူရမယ်ဆိုရင် မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ အဲ့ဒါလေးကို နည်းနည်းကြောက်တယ်။
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက ဘာလဲဆိုရင် ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အမတို့နိုင်ငံမှာ အခုချိန်ထိ ဒီမိုကရေစီ ဘယ်လောက်ပဲ ရသွားပြီလို့ ပြောပေမယ့် mentally ဒီမိုကရေစီမရသေးဘူး မောင်လေး။ လူတွေဆီမှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ခု ကပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီက တန်ဖိုးဒီလောက်မရှိဘူး။ အဲ့နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့mentally ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ အမထင်တယ်၊ မမတို့ ပညာရှိအသိုင်းအ၀ိုင်းပေါ့နော် မမတို့မြင်သလောက်က အားလုံးက အရမ်းနားလည်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာလည်း တစ်ချို့တွေက ဟိုပေါ့ ဘာသာ- မြန်မာလူမျိုး ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေပါစေ။ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမတူတဲ့အပေါ်မှာ အမြင်တွေစောင်းကြတယ်။ အဲဒါကို စိတ်မကောင်းဘူး အမ။ အဲဒါကတော့ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ အဲဒါဝမ်းနည်းတာလည်း ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိမှာစိုးလို့ ၀မ်းနည်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်အရမ်းချစ်တဲ့ကိုယ့် မြန်မာနိုင်ငံကြီး တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်မှာကိုကြောက်လို့ ၀မ်းနည်းတာ။
အိန္ဒိယသည် ဒီအချိန်မှာ ရင်ဘောင်တန်းပြီးတော့ ဟောလီးဝုဒ်နဲ့ အပြိုင် သွားနိုင်တယ်။ ဟောလီးဝုဒ်က ဒါရိုက်တာတွေက အိန္ဒိယက Actor တွေကို တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့လာပြီး ရှိခိုးကန်တော့ပြီး ခေါ်နေတယ်။ အိန္ဒိယက Actor တွေက `ကျွန်တော်တို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး´ လို့ ပြောရတဲ့အထိအောင် ရောက်နေတယ်။ Why? ဘာဖြစ်လို့လဲ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အခုအချိန် Medical မှာ – ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာ အကောင်းဆုံး Kidney (ကျောက်ကပ်) ဆေးရုံ၊ အကောင်းဆုံး Heart Transplant (နှလုံးအစားထိုးကု) ဆေးရုံ အိန္ဒိယမှာရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ သွားကြည့်လိုက်မောင်လေး။ ဟိုမှာ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုမရှိဘူး။ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း မဖြစ်ဘူးလား။ ဖြစ်တယ်။ ဒါနိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ China မှာဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ တကယ် လူတွေရဲ့ Mind မှာ – သူတို့ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာက Politics (နိုင်ငံရေး) တွေကြောင့် ဖြစ်တာများတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ Mind ထဲမှာ တစ်ကယ်တမ်း မောင်လေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် – အမ ဥပမာတစ်ခုပြမယ်။
ရှာရွတ်ခန်းဆိုတာက အိန္ဒိယမှာရော၊ ကမ္ဘာမှာရော လွှမ်းမိုးထားတဲ့ Actor တစ်ယောက်ပေါ့နော်။ သူက အစ္စလာမ်ဘာသာ စစ်စစ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ဟိန္ဒူ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ ဟိန္ဒူပေါ့နော်။ ဟိန္ဒူဘာသာနိုင်ငံပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘောလီးဝုဒ် မှာ မောင်လေးကြည့်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ၁၀၀ မှာ ၉၀ က အစ္စလာမ်တွေများတယ်။ မွတ်စလင်တွေများတယ်။ အမီးရ်ခန်းတို့၊ ဆလ်မန်းခန်းတို့၊ ရှာရွတ်ခန်းတို့၊ စေဖ်အလီခန်း(saif ali khan) တို့ အကုန်လုံးက မွတ်စလင်တွေနော်။ ဒါရိုက်တာကြီးတွေမှာဆိုလည်း မွတ်စလင်တွေပဲ။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယသည် ဘယ်တုန်းကမှ – မမအလုပ်လုပ်ခဲ့တာ ၇ နှစ်မှာလည်း တစ်ခါမှ – ဟို သူသည် မွတ်စလင်မို့လို၊ သူသည် ဟိန္ဒူမို့လို့ သူသည် Chinese မို့လို့ တစ်ခါမှ မကြားခဲ့ဖူးဘူး။ ရှာရွတ်ခန်းသည် ၁၈ နှစ် – သူ့ရဲ့အလုပ်သက် အနှစ် ၂၀ မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ၁၈ နှစ်လုံးလုံး အကယ်ဒမီ – Film Fair Award ကို ယူခဲ့တယ်။ အဲဒါသည် သက်သေပြနေတာ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘယ်လောက်ဒီမိုကရေစီဖြစ်လည်းဆိုတာကို သက်သေပြနေတာပဲပေါ့နော်။ မမ အိန္ဒိယကို မြှောက်ပြီးပင့်ပြီး ပြောဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူး။ မမနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာ အဲလိုဖြစ်စေချင်လို့ ကမ္ဘာမှာ။ အခုဆိုရင် အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်။ ဘယ်သူ့မှ ဒီ အိန္ဒိယသည် မတရားဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူး။ အိန္ဒိယသည် အရမ်း Fair ဖြစ်တယ်။ လူတွေဆိုရင် – အမေရိကန်တွေ၊ ယူရိုပီယန်တွေတောင် အင်ဒီယန်တွေကို လေးစားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့။ ဘယ်လောက်ပဲ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်။ သူတို့သည် အလုပ်သဘောဆိုရင် အလုပ်သဘောအရ ဆုံးဖြတ်တယ်။ သဘောက ရှာရွတ်ခန်းသည် ၁၈ နှစ်လုံးလုံး ယူလာတယ်။ တစ်ခြားဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီး၊ တော်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Nomination (ဇကာတင်စာရင်း) ဆိုတာ သူရမလား၊ သူရမလား ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်း ရှာရွတ်ခန်းက ဆွဲသွားတယ်။ အမြဲတမ်း ရှာရွတ်ခန်းပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ သူရသင့်တယ်။ သူ့ကိုပေးတယ်။ သူသည်မွတ်စလင်ဖြစ်လို့၊ ဒါသည် ဟိန္ဒူဖြစ်လို့ သူ့ကိုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် – အဲဒီလိုမျိုးလည်း သူတို့မှာ မရှိဘူး။
ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကအစ မင်းသားတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင် သူ မွတ်စလင်လား၊ ဟိန္ဒူလားဆိုတာကို မကြည့်ဘူး။ သူသည် ဘယ်လောက်တော်တဲ့ Actor လဲ။ သူ့အလုပ်ကို ဘယ်လောက်ပိုင်အောင်လုပ်နိုင်လဲ။ လူတွေကို ဘယ်လောက်အထိ ချစ်အောင်လုပ်နိုင်လဲ။ အိန္ဒိယမှာ ရှာရွတ်ခန်းတို့ ဆလ်မန်းခန်းတို့ကို မွတ်စလင်တွေထက်ကိုပိုပြီးတော့ ဟိန္ဒူတွေကချစ်တယ်။ အရမ်းချစ်တယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီဟာလေးတွေက အရမ်းစကားပြောတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကြီး – ဟို – ဘယ်လိုခေါ်မလဲ – စည်းလုံးမှု – အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အဲဒီစည်းလုံးမှု ရှိလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်။ အခုဆိုလို့ရှိရင် အမတို့ နိုင်ငံခြားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် – မမတို့ဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်။ မောင်လေးကို မမ ရင်ဖွင့်ပြီးပြောပြတာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာတယ်ဆိုရင်- ဟာ – သူတို့က မွတ်စလင်တွေ။ တစ်ချို့ဆိုပြောမယ် ဒါ ကုလား- ဘာညာပေါ့။ ဟုတ်ပြီ။ မမတို့ မြန်မာ စာအုပ်ကိုင်ထားတယ်။ မြန်မာ ပတ်စ်ပို့ – ဒီပတ်စ်ပို့နဲ့ နိုင်ငံခြားကိုသွားတယ်။ ထိုင်းကိုသွားတယ်။ စင်ကာပူကိုသွားတယ်။ ဘာပြောလဲ။ သူတို့မသိဘူး မမတို့ဘာ ဘာ ဘာသာလဲဆိုတာကို။ ဖမာ – ဗမာ – စာအုပ်ကိုထားလိုက်တယ်။ ဆိုတော့ ၀မ်းနည်းတာက ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်နိုင်ငံရောက်လာရင် ကိုယ့်နိုင်ငံကလူက ကိုယ့်ကိုယ်ပယ်လိုက်တယ်။ ဒါ အစ္စလာမ်မို့လို့။ ဒါ ခရစ်ယာန်မို့လို့။ ဒါ Chinese မို့လို့။ နိုင်ငံခြားသွားပြန်တော့လည်း ဗမာမို့လို့တဲ့။ ၀မ်းနည်းစရာကြီး။ ဆိုတော့။
စိတ်မကောင်းဖြစ်တာ ဘာလဲဆိုရင် – ဒါဆို အမတို့က Identity က ဘယ်လိုထားရမလဲ။ အမ မလေးရှားမှာ Sunway ကောလိပ်မှာ ကျောင်းတက်တယ်။ အားလုံးစာအုပ်တွေ တစ်နှစ်တစ်နှစ် အမတို့ တိုးရတယ်။ Student Visa ကို Extension (သက်တမ်းတိုး) လုပ်ရတယ်။ အားလုံးစာအုပ်ရောက်လာတယ်။ မမစာအုပ်က အမြဲနောက်ကျတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ မြန်မာ မို့လို့။ မြန်မာမို့လို့ သူတို့ သေချာ ပြန်စီစစ်နေတယ်။ လုပ်နေတယ်။ နစ်နာမှုက နေရာတိုင်းမှာ။ မမတို့အတွက် အရမ်း Unfair ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါမျိုးတွေပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင် ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ ဒီထက် အဆတစ်ရာ တိုးတက်လိမ့်မယ်လို့ ကိုယ်ထင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ တစ်ကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း တရားမျှတတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီလိုမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ မမဆိုလို့ရှိရင် မောင်လေးစဉ်းစားကြည့်။ မမကို ဘောလီးဝုဒ်မှာ။ မောင်လေးတို့က ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီး။ အိန္ဒိယက မင်းသမီးဆိုပြီး သိထားပေမယ့်။ အိန္ဒိယရောက်သွားလို့ရှိရင် – She is Burmese citizen. She is Burmese. She is from Myanmar. ဒါပဲပြောရတာလေ။ ဆိုတော့ တစ်ကယ်တမ်းဂုဏ်တက်ရင် ဘယ်သူတက်တာလဲ။ မမနိုင်ငံ ဂုဏ်တက်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဂုဏ်တက်တယ်။ မမ မြန်မာနိုင်ငံကဆိုတာ – အဲဒီစကားလုံးပဲ စပြောတာပဲ။ She is Myanmar citizen. ဆိုတော့ အဲလိုမျိုး ဥစ္စာ။ ကိုယ့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်လိုမျိုးမဆို အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတာကို ကိုယ်က ၀မ်းသာပေမယ့် – ဒီကိုလာလိုက်တဲ့ အခါကြလို့ရှိရင်။ အော် – သူက အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ သူက ငါတို့မြန်မာမဟုတ်ဘူး။ No
ကျွန်မ ဒီမှတ်ပုံတင်ကိုင်ထားတာ၊ ကျွန်မအမေအဖေဒီမှတ်ပုံတင်ကိုင်ထားတာ ကျွန်မအဖိုးအဖွားက အစ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီး မြန်မာ မှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားတာ ကျွန်မအမေ မော်လမြိုင်သူစစ်စစ်။ ဒီမြန်မာ အစား အစာ စားပြီးတော့ ဒီမြန်မာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုအောက်မှာ ကြီးလာတာ မြန်မာသီချင်းလေးတွေဆိုဆိုပြီး သိပ်လာတာ ဆိုတော့ အဲ့လိုမြန်မာမဟုတ်ဘူး သူကမွတ်စလင်ဆိုလို့ရှိရင် အမ အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ That is nationality . Nationality က ငါ့ရဲ့ nationality ပဲ။ ဘယ်သူမှလာပြီး မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒါအမှန်တရားပဲ။ That is the truth ဘယ်သူမှပြောင်းလို့မရဘူး။ မမဆို ဘယ်လောက်ထိ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်လဲဆိုရင် အိန္ဒိယမှာ အခါပေါင်းမြောက်များစွာ passport change လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် visa တွေဘာတွေ လျှောက်တဲ့အချိန် ကိုယ့် passport က အမြဲဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ စိတ်တော့ဆိုးတာပေါ့။ ဟာ… လဲမယ် ဘာညာ။ တကယ်တမ်းအခွင့်အရေး ရလာလို့ရှိရင် I don’t want. တကယ်တမ်း လဲရတော့မယ်အချိန်ကျလို့ရှိရင်။ ဟာ…မပေးဘူး။ ငါ့ citizen လေ။ ချစ်တယ် ဟာ…ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး citizen မို့လို့ American citizen မို့လို့ မပေးချင်ဘူးဆိုတစ်မျိုး။ မြန်မာ citizen ဆို အားလုံး လဲချင်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာကအစ လဲကြတာပဲ။ အမကိုကြည့်စမ်း။ နိုင်ငံကိုချစ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်အချိန်သိရလဲ အဲလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကြတော့ မလဲချင်ဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဟာ မပေးချင်ဘူး။ I don’t want to give up. ဒီစာအုပ်လေးကိုမပေးချင်ဘူး။ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ feeling ကိုယ့်ရဲ့ attachment ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ပေါ့နော်။
နောက်ဆုံးပြောမယ် နိုင်ငံခြားမှာ function တစ်ခုမှာပေါ့နော်။ international function တစ်ခုလုပ်တယ်။ International function လုပ်တဲ့အခါမှာ ဟာ…သဘောတွေကျ ဘာညာ နိုင်ငံတိုင်းက national anthem တွေ နိုင်ငံတော်သီချင်းတွေဆိုကြ
ဘာလုပ်ကြ နားထောင်နေတယ်။ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံ National anthem လည်း ကြားရတော့ မောင်လေးရယ် ဘုရားစူးပါစေသိလား။ ကြက်သီးတွေထပြီး မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အမထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ မင်းသမီးအဖြစ် asachief guess အနေနဲ့၊ အမ အိန္ဒိယ ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီး အနေနဲ့ Chief Guest အနေနဲ့ အဲ့ဒီ international show သွားတယ်။ သဘောတွေကျ ပျော်နေတယ်။
ရယ်နေတယ်နော် အားလုံးနိုင်ငံအကြောင်းတွေ ပြတယ်။ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံ အချိန်လည်းလာရော national anthem နိုင်ငံတော် သီချင်းလည်း ဖွင့်လိုက်ရော မျက်ရည်က အလိုလိုနေရင်းနဲ့ ကျလာပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းသားဘ၀လေးကို သတိရလာတယ်။ ကျလာပြီး။ ကြက်သီးတွေထ လာတယ်။
သြော် ငါ့မြန်မာနိုင်ငံကို ငါအခုအချိန်ထိ ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ။ ကြည့်စမ်း။ အဲ့အချိန်တုန်းက `တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင်´ လည်း မရိုက်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ အဲ့အချိန်တုန်းက အမ မင်းသမီးဖြစ်တာ အမ နာမည်ကြီးတာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြောင့် အိန္ဒိယပရိသတ်ကြောင့်။ ဒါတောင်မှပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံသီချင်းလေး ကြားရတော့ ဒိန်း ..ဆို ကြက်သီးတွေထပြီးတော့ မျက်ရည်ဝဲပြီး မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကတောင် မေးတယ်။ ဟယ် အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုန်း ဟယ်။ အဲ့ဒါ ငါတို့နိုင်ငံတော်သီချင်း ဆိုပြီး အဲ့လိုမျိုးပေါ့ ပီတိဖြာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်မကောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ ငါတို့မှာတော့ ချစ်လိုက်ရတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် တန်းတူဆက်ဆံချင်းကို ဘာလို့မခံရတာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ? ဘယ်နေရာမှားနေလဲ? ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့လည်း `တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင်´ မရိုက်ခင်အထိ အမ အရမ်း doubt ရှိတယ်။ မရဲဘူး ။ မရဲဘူးဆိုတာ ကိုယ့် acting ကိုလည်း ဟိုဟာဖြစ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ နည်းနည်းလေး doubt ရှိတာက သြော် – ရုံတင်တဲ့အခါကျရင် ဘယ်လိုနေမလဲ လူတွေက ခွဲခြားပြီး ဆက်ဆံမလား။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကို အများကြီး ဂုဏ်တက်အောင်လို့ လုပ်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ။ ကိုယ့်ကိုရော ဒီလိုတုန့်ပြန်မှုတွေ ပြန်ရပါ့မလားဆိုပြီးတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ Doubt တွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်း `တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင်´ ရုံတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်း အဲဒီ Doubt တွေ ပြေသွားတယ်။ ဦးမျိုးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လုံးဝမေ့လို့မရဘူး။ အရမ်းပီတိအဖြစ်ဆုံးက လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်ကပဲ အစ်မရဲ့ We Love Lilla Khan ဆိုတဲ့ ပေ့ခ်ျမှာ အီးမေးလ်တစ်ခု ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတော့- အီမေးလ်တွေကို တစ်ခါတစ်လေဆိုလည်း တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ ပုံမှန်စစ်ပေးတယ်လေ။ ကိုယ့်ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ကိုယ်က ကိုယ်တိုင်စကားပြောပေးတယ်။ စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ – အဲဒီအီးမေးလ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ မွေးကာစ ကလေးလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေပေါ့နော်။ ဘယ်သူများ ငါ့ကို မွေးကာစ ကလေးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ပို့တာလဲဆိုတော့ – ဓာတ်ပုံတွေကလည်း ဖွင့်တာ နှေးတယ်မောင်လေးရဲ့။ အဲတော့ ဖွင့်ရင်းဖွင့်ရင်းမှ နောက်ဆုံးပုံလေးမှာ အမေရယ် – အဲဒီကလေးလေးရဲ့အမေက သူ့ရဲ့သမီးလေးကို ချီထားတာပေါ့နော်။ အဲပုံလေးဆိုတော့။ နောက်ဆုံးမှာ သူက စာရေးထားတယ်။ `မလိုက်လာခန်း´ တဲ့ `မလိုင်လာခန်းအကို အရမ်းချစ်တယ်။ အရမ်းလေးစားတယ်´ တဲ့ `အရမ်းလည်း သဘောကျတယ်´ ပေါ့။ `တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင်´ ကိုလည်း ဘယ်နှစ်ခါကြည့်တာ။ သူ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့တုန်းက `တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင်´ ကို သူ ကြည့်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်။ နေ့စေ့လစေ့ကြီးနဲ့ပေါ့နော်။ အခု သမီးလေးမွေးပြီးတဲ့။ အဲဒီသမီးလေးကို `လိုက်လာ´ လို့ နာမည်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ ဆိုတော့ အဲဒီအရာလေးက အရမ်း – ဘယ်လိုခေါ်မလဲ – ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူး၊ သိလား။ အဲဒီဖီလင်ကို မောင်လေးက ပိုက်ဆံနဲ့လည်း ၀ယ်လို့မရဘူး။ ဘာနဲ့မှဝယ်လို့မရဘူး။ အဲဒီဖီလင်က အကောင်းဆုံးပဲ။ ကြည့်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာလေ ကိုယ်နဲ့ တစ်ခါမှလည်း မတွေ့ဖူး၊ မမြင်ဖူး၊ စကားမပြောဖူးဘူး၊ ကိုယ်လည်း သူတို့အကျိုးရှိအောင် ဘာမှ မလုပ်ပေးခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါတောင်မှပဲ ကိုယ့်ကိုယ် အဲဒီလောက်အထိချစ်တယ်။ မွေးထားတဲ့ သမီးဦးလေးရဲ့ နာမည်ကိုလည်း လိုက်လာလို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ အရမ်းဝမ်းတွေသာပြီးတော့လေ။ အမလေး – အမလည်း ချက်ခြင်းကို ပြန်လိုက်တယ်။ ပြန်ပြီးတော့ Blessing တွေ အများကြီး ပေးလိုက်တယ်။ ပေးပြီးတော့ သမီးလေးကို မြင်ဖူးချင်တယ်လို့။ အိမ်လာလည်လို့ ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့။ ဘာညာဆိုပြီးတော့တောင်မှ ဖိတ်လိုက်သေးတယ်။
အဲလောက်အထိ ပရိတ်သတ်ရဲ့အချစ်ကို ရတယ်ဆိုတော့လေ – ကိုယ်က အရမ်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီပီတိက ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရဘူး။ ဆိုတော့ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီအမျိုးသမီးဆိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ။ ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်။ `လိုက်လာလို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ် အမ´ တဲ့ – ပေါ့နော်။ သမီးလေးကို ဆုတောင်းပေးပါတဲ့။ ဆိုတော့ အမလည်း အီးမေးလ်ပြန်လိုက်ရော သူ့အမျိုးသားရော၊ သူရော ကလေးလေးနဲ့ပုံပါ အကုန်လုံးပို့တယ်။ ပိုပြီးတော့ – `အမခေါ်တာ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါ့မယ်´ ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ I’m really glad လေ။ (အရမ်းပျော်တာပေါ့လေ) ရင်ထဲကနေ ကို ကျေနပ်တာ။ ပြောရင်းနဲ့တောင် ကြက်သီးထတယ်။
This entry was posted on July 29, 2015 at 2:52 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.